La Yaabka Aduubka: Wiil dharka & kabaha hooyadiis Iskoolkiisa ku yimid (Sawiro) – SBC
La Yaabka Aduubka: Wiil dharka & kabaha hooyadiis Iskoolkiisa ku yimid (Sawiro)
Wiil arday iskool ah oo da’diisu tahay 15 sano ayaa ku dhaqaaqay talaabo aad ula yaabeen dadweynaha wadanka Marfeykanka isla markaana soo jiidatey saxaaafada ka dib markii uu todobaadkan Iskoolka uu dhigto uu ku yimid isagoo ku labisan dharka & kaba hooyadiis.
Wiilkan oo lagu magacaabo Sam Saurs oo dhigta ama wax ka barta dugsiga John Sedwick Junior High ee deegaanka Port Orchard ee magaalada Washington ayaa la sheegay in hooyadiis ay la ogeyd in uu dharkeeda xirto oo waliba Iskoolkiisa uu tago, taasi oo keentey in Iskoolka laga eryo inta ka dhiman sanad dugsiyeedkan oo dhan.
Sam ayaa ayaa inta uu meel iska dhigay dharkiisii Iskoolk wuxuu ku soo labistay dharka hooyadiis ee caadiyan ay gashato iyadoo waliba ay u sii dheertahay kabaheeda aadka uu u dheeryahay qoobkoodu.
Xafiiska maamulaha ayaa looga yeeray Sam, waxaana xiligaasi uu ku labisnaa saaka madow oo uu ku labistnaa & waliba kabo cirbo dhaadheer, waxaana arinkaasi aad ula yaabay maamulkii Iskoolka, oo ku sheegay in uu ku xadgudbay shuruucda Iskoolka isla markaana uu marin habaabinayo ardeya iskoolka.
Laakiin talaabada uu ku dhaqaaqay maamulka Iskoolkaasi waxaa si weyn uga carootey Sam hooyadiis Ivanna Leible oo sheegtey in wiilkeeda lagu xadgudbay rabitaankiisa waxaana wareysi ay siisay talefishin deegaankaasi laga daawado ay si weyn uga carootey talaabada wiilkeeda laga qaaday.
“Waxaynu ogaanay in aynu isku cabir kabaha ka xirino, wax weyna iska caadi ah in qofku sameeyo wixii uu jecel yahay, tanina wiilkeyga hiwaayad ayay ka aheyd, aad ayaan uga xumahay falka waxbarashada wiilkeyga looga joojiyey, waana talaabo xadgudub ah” ayey tiri Ivanna Leible oo aad uga carootey talaabadaasi xili ay u wareymaysay Telefishinka KING5.
Markii wareysigaasi uu baahiyey Tv-ga waxaa la sheegay in maamulka Iskoolkaasi ay qafiifiyeen ganaaxii iskool ka eryada ee lagu soo rogay Sam, waxaana looga dhigay 3 maalmood oo aanu iskoolka cag soo dhigi karin.